Bartimaamedka Kooxda Barcelona Ousmane Dembele Oo Kooxdiisa Ganaax Afka U gelisay!
Friday, July 20th, 2018 - 00:15:28
Friday August 11, 2017 - 11:21:58 in Wararka by Abdirahman Abduqadir Maankiz
Kooxda Jarmalka ee Borussia Dortmund ayaa soo saartay warbixin kale oo ay kaga hadlayaan xaalada xiddigooda Ousmane Dembele, kaasoo seegay tababarkii maanta xilli lala xiriirinayo xiddiga Faransiiska inuu ku biirayo Barcelona.
Dortmund ayaa mar sii horeysay waxa ay sheegeen inay diideen dalab ay Barcelona ka soo gudbisay 20 jirkaan ka dib wadahadalo ay la yeesheen wakiilo ka socda kooxda horyaalka La Liga ka dhisan ee Blaugrana.
Waxaana warbixintii ugu danbeysay ee ay soo saareen ay ku sheegeen in ciyaaryahanka uu marmarsiiyo la’aan ku seegay tababarkii maanta, waxaana ay ka mamnuuceen inuu ka qeyb qaato tababarada iyo ciyaaraha kooxda ilaa iyo isbuuca danbe isagoo seegaya kulankooda koobka maxaliga.
"Ousmane Dembele waxa uu maanta seegay tababarkii BVB marmarsiiyo la’aan. Ciyaaryahanka waxa uu u muuqdaa inuu u sameeyay si ku talo gal ah.” ayay tiri Dortmund.
"Sababtaas darteed waan ganaaxi doonaa. Ciyaaryahanka waxa uu weli ku sugan yahay Dortmund. Markii aan la tashanay tababaraheena waxaan ka ganaaxnay dhamaan tababarada iyo ciyaaraha ilaa iyo isbuuca danbe ka dib kulankeena koobka maxaliga.”